जब पूर्व युवराज पारश सडकमा झाडु लगाउँदै गरेको अवस्थामा भेटीए (भिडियो) - Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/जब पूर्व युवराज पारश सडकमा झाडु लगाउँदै गरेको अवस्थामा भेटीए (भिडियो)
जब पूर्व युवराज पारश सडकमा झाडु लगाउँदै गरेको अवस्थामा भेटीए (भिडियो)
प्रत्येक शनिवार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा स्थानियले सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । करिब ३ वर्ष देखि सुरु भएको बाग्मती सफाई अभियान संगै टोल सफाई अभियान पनि जारी छ । शनिवार पशुपति मन्दीर परिसरमा सरसफाईमा गएका स्थानियको समुहमा पूर्व युवराज पारस पनि देखिए । उनले हातमा झाडु लिएर मन्दीर परिसरमा सफाई गरे ।
लामो कपाल पालेका पारस खैरो सल ओढेल मन्दीर परिसरमा पुगेका थिए । आफु राजा हुन जन्मेको नभई सर्वसाधारण नागरिकको जस्तो जिवन विताउने बताएक पूर्वयुवराज पारस विभिन्न हर्कतका कारण सामाजिक सञ्जालमा चर्चीत पात्र हुन् ।
उनी युट्युवर सोनिका रोकायसंगको सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा छन् । मुलुकका विभिन्न स्थानको भ्रमणमा जाँदा सोनिकाका साथमा पुग्ने गरेका पारस र सोनिकाको सम्बन्धका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी हुने गरेको छ । तर दुवै जनाले आफुहरुबीच त्यस्तो कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँदै आएका छन् । सहभागीहरुले अब मुलुकका लागि लड्नु पर्ने र त्यसका लागि मनको सफाई पनि आवश्यक भएको बताए ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कोरना भाइरस नेपाल छिर्न नदिन, छिरेमा गरिने कार्यको लागि दुईवटा समिति गठन गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उच्चस्तरीय समिति र प्रदेश स्तरीय द्रुत प्रतिकार्य समिति गठन गरी कार्य अघि बढाएको छ ।
घरझगडाको भिडिओ, युट्युबको व्यापार ! डलक को खेती
अष्ट्रेलियाको मा’र्मिक दृष्यः ज’लेकी घा’इते आमाको श’ल्यक्रिया गर्दा बच्चाले…भिडियो हेरि सक्दो शेयर गरौ
प्रमिलालाई छोराछोरीले महिनौपछि भेट््दा,, भन्छन आमालाई घर लैजाने ! तर निष्ठुरी आमा,,छोरा छोरीको कारुनिक अन्तरबार्ता भिडियो हेर्नुहोस